TP-LINK TL-WR740N ROUTER NGWA NGWA - FIRMWARE EKWENTỊ NA NGWAỌRỤ NDỊ ỌZỌ - 2019
Firmware na nrụzi nke TP-Link TL-WR740N router
Ndị na-akpa nkata na-agba ngwa n'ịgụ na ịde faịlụ na diski ike nke kọmpụta, ka ị na-amụba arụmọrụ ya. Ngwá ọrụ arụmọrụ Windows site na ndabara nwere usoro a wuru iji dozie ụdị nsogbu a, ma ọ bụghị dị irè dịka ngwanrọ nke atọ. Banyere ya na a ga-atụle n'okpuru ebe a.
Mgbasa ozi bụ usoro dị mkpa maka nyochacha, usoro a na-enye gị ohere ịdebe iberibe faịlụ n'ụzọ dị mma maka sistemụ arụmọrụ, ka ị na-arụ ọrụ nke draịvụ ike na PC dum. Ihe omume ndị dị na isiokwu ahụ meriri nsogbu a nke ọma.
Onye nkpuchi mbụ iji zere arụmọrụ nke arụpụtara na Windows bụ ngwaahịa Auslogics. Ọ nwere ike nyochaa HDD site na iji ọrụ a wuru na-arụ ọrụ S.M.A.R.T. Enwere ike ịdọrọ ike karịa 1 TB. Na-arụ ọrụ na usoro faịlụ FAT16, FAT32, NTFS na 32 na 64 bit OS. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta usoro kachasị mma, usoro ihe omume ahụ nwere ọrụ iji mepụta ọrụ maka igbu ha n'enweghị onye ọrụ.
Auslogics Disk Defrag bụ n'efu, ma ndị mmepe etinyela mgbasa ozi n'ebe ọ bụla o kwere omume. Mgbe ị na-etinye ihe, enwere ihe ize ndụ iji gbakwunye na ntinye adware dị oke mkpa.
Ihe omume dị oke mfe nke nwere ọtụtụ algọridim na nchikota ya na-akwado na-arụ ọrụ na draịvụ draịva. A na-ede ihe nile edere ede na faịlụ na-edebanye aha, nke a pụrụ ile anya ma nyochaa n'oge ọ bụla. Usoro ihe omume ga-enye gị ohere ịhọrọ nhọrọ kachasị mma iji bulie mpịakọta diski, dabere na ogo nke mkpirikpi.
MayDefrag bụ n'efu, ma nsogbu ahụ bụ na ọ bụ naanị na e meela ka ọ bụrụ onye a kwụrụ. Imirikiti windo ozi akọwabeghị. Enweghi nkwado software site na onye mmepụta ruo ogologo oge, ma ọ ka dị mkpa taa.
Dị ka ngwaahịa sitere na Auslogics, Defraggler nwere ọrụ nhazi ọrụ maka ịmepụta usoro. Ọ nwere naanị ngwaọrụ abụọ: nyocha na nchịkọta, ma ihe ndị a anaghị mkpa.
The interface bụ asụsụ Russian, enwere ọrụ maka ịmepụta faịlụ ọ bụla, ma ihe a nile dị maka n'efu.
Onye na-echefu ego
Ihe omume mbụ na ndepụta anyị nke nwere ike ime ka ọrụ ya dị mfe bụ na ọ na-egbochi mpempe faịlụ site na iji ọrụ ahụ Ihe ederede. Nke a pụtara na usoro nkwụsịtụ ga-abụ nke na-adịkarịghị ugboro ugboro, na nke a, n'aka nke ya, ga-eme ka ọrụ kọmputa dịkwuo elu. Dipper dị mfe iji akpaaka, nweekwa ọkwa dịgasị iche maka nke a: dịka ọmụmaatụ, njikarịcha akpaka na njikwa ike kọmputa.
Ozugbo i setịpụrụ akụkụ niile maka onwe gị, ị nwere ike ichefu ịdị adị nke onye na-eme ihe nchịkọta, n'ihi na ọ ga-eme ihe niile maka gị.
PerfectDisk jikọtara ụfọdụ atụmatụ bara uru nke Auslogics Disk Defrag na Diskeeper. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-egbochi usoro nkesa disk ma nwee usoro nlekota oru nke S.M.A.R.T. Akpaaka nke usoro na-eme na enyemaka nke kalenda mejupụtara na ohere nke ọnọdụ ha zuru ezu. Ezi ego maka ndị ọrụ nke ngwá ọrụ a dị ike ga-abụ ọrụ nke ihichapụ akụkụ nke diski diski, nke na-ewepu faịlụ ọ bụla na-enweghị isi, na-ahapụ ohere.
N'ihi ya, maka usoro dị ike dị otú ahụ ga-akwụ ụgwọ. E nwere nsụgharị n'efu, ma ọ dịkwa oke uru maka kọmputa. Njikọ asụsụ Russian na PerfectDisk bụ eze na-anọghị.
Otu n'ime ihe kachasị ike na ewu ewu sitere na ụlọ ọrụ IOBit. O nwere ihe ngosi nke oge a, nke nwere echiche nke puru iche site na mmemme nile di n'isiokwu a. Smart Defrag nwere ọtụtụ njirimara bara uru na-enye gị ohere ka ị ghara iche banyere imebi usoro. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ dị jụụ, ya bụ, na-enweghị ọkwa, ịmepe usoro ahụ n'enweghị enyemaka onye ọrụ.
Smart Defrag nwere ike ịkpaghasị mgbe ịmalite kọmputa gị, ewepu faịlụ na nchekwa ndị ị họpụtara na mbụ. Dị ka PerfectDisk, ọ nwere ike iwepụ ohere diski ike. Ndị na-egwu egwuregwu ga-enwe ekele maka njirimara njirimara egwuregwu, mgbe nke ahụ gasịrị, arụmọrụ ha kachasị.
UltraDefrag bụ ihe dị mfe na-abaghị uru taa. Ọ nwere ike iwepụ ohere tupu ịmalite os, rụọ ọrụ na tebụl MFT isi. O nwere nhọrọ dịgasị iche iche, nwere ike imegharị site na faịlụ ederede.
Usoro a nwere uru niile bara uru: enweghị onwe, ndị dị elu, obere nha, na n'ikpeazụ, na-egosi nsonaazụ dị ịtụnanya nke njikarịcha nke draịvụ ike.
Nke a bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị na O & O Software na mpaghara a. Na mgbakwunye na nchịkọta usoro ihe dị mfe, O & O Defrag nwere ọtụtụ ụzọ mgbagwoju anya isii. Ngwaọrụ O & O DiskCleaner na O & O DiskStat na-ebuli diski ike ma nye nkọwa zuru ezu banyere ihe si na usoro a.
Nnukwu uru O & O Defrag bụ nkwado maka ngwaọrụ USB na nke ọzọ. Nke a na-enye gị ohere ịkwalite ọkụ-draịva, SSD-draịva na ngwaọrụ nchekwa ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe omume ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na ọtụtụ mpịakọta n'otu oge ahụ, ọ pụkwara imezigharị usoro nkesa.
Download O & O Defrag
Ogologo oge a ka esiteghi na ya, ma na elele anya mbụ o yiri ka ọ bụ kpamkpam, mana nke a adịghị anya. Algorithms nke Golden Bow Systems zụlitere maka onye nkata a ka dị mkpa ọbụna na usoro nhazi kachasị anya. Njikwa ahụ na-ezobe ọtụtụ ọrụ obere, mana ọ bara uru maka ịmepụta diski ike.
E nwere obere usoro maka nyochaa arụmọrụ nke draịvụ ike, ọrụ nke ihichapụ ohere n'efu, na ihe a niile maka n'efu. E nwere ụzọ ntanye abụọ, ndepụta scheduler na mwepụ aha. Otú ọ dị, ndị a bụ ngwá ọrụ dị mkpa niile dị na ndị na-emebi ihe n'oge a.
Puran Defrag bụ usoro n'efu maka ịmepụta diski ike na ntọala zuru ezu maka usoro ọ bụla. Dị ka ọtụtụ ndị na-emebi ihe n'oge gara aga, ọ na-enyekwa ikike ịmegharị. Ihe dị iche site na ndị nnọchianya ndị ọzọ nke nke a bụ na ndị mmepe elekwasịghị anya na ọnụ ọgụgụ ọrụ, kama na ọtụtụ nhazi dịgasị iche maka ha. Puran Defrag ga-enwe ike imeziwanye arụmọrụ nke PC gị site na nkasi obi.
Ọ bụ n'efu ma dị mfe iji. O di nwute, enwereghi akwado usoro a kemgbe afo 2013, ma o bu ihe bara uru maka kọmputa di iche iche. Ọ bụ ezie na ọ dịghị Russia, interface ahụ bụ ihe omimi.
O doro anya na ndị a abụghị ndị ọ bụla nwere ike ịkatọ nke ndị ọrụ na-akwanyere ùgwù, ma a na-eme ka ha pụta ìhè n'ihi na ọ dị mfe, ma ọ bụ, ọzọ, ọrụ dịgasị iche iche bara uru. Mmemme nke nke a dị nnọọ irè maka usoro faịlụ, ebe ọ bụ na ha na-ebuli ịrụ ọrụ site na ịhazi ihe ndị a na-achụsasị na mbara.